သမင်လေး ( Fawn )
Skull Go Launcher EX locker 1.9
4:33 AM Android Applications No comments
Application Name - Skull Go Launcher EX locker
File Size - 1.77MB
OS - Android 1.6 or higher
Feature - Skull interface
Download Link 1 : Download Skull Go Launcher
Download Link2: Download Skull Go Launcher
3:59 AM Android Applications No comments
Application Name - Fingerprint Scanner
Version - 1.1100
File Size - 1. 78 MB
OS - Android 2.3 or higher
Feature - Security Lock with Your Finger
Download Link 1 : Download Fingerprint Scanner
Download Link2: Download Fingerprint Scanner
Application Name - Talking Tom
Verison - 1.6
File Size - 6. 42 MB
OS - Android 2.1 or higher
Feature - Talking Cat , Funny !
Download Link 1 : Download Talking Tom
Download Link2: Download Talking Tom
5:56 AM DeepFreeze2comments
အကောင်းဆုံးဆော့ဖ်ဝဲလေးလို့ ထင်ပါတယ် ။
Deep Freeze ရဲ့ သဘော
တရားလေးကို တော်တော်များများ သိကြမှာပါ ။
သူတွေအတွက် ပြောပြတာပါ ။
အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ အသုံးပြုတဲ့သူတွေက သူတို့လိုချင်တာတွေကို Download
လုပ်ကြတာတွေရှိပါတယ် ။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့သူက Download လုပ်တာနဲ့တင် မကျေနပ်သေးဘူး
ထင်တယ် . . တစ်ခါတည်း Install ပါလုပ်ပစ်လိုက်တယ် ။ အဲ့လိုမျိုး Install လုပ်တဲ့သူတွေ
များလာရင် ကွန်ပျူတာက နှေးလာပါတယ် ။ အဲ့အခါကျရင် အင်တာနက်သုံးတာကလည်း
အရင်ကထက် ပိုပြီး နှေးလာပါတယ် ။ ပြဿနာကတော့ ကွန်ပျူတာထဲက Program
File တွေများလာလို့ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ Program File တွေကို တစ်ခုချင်း
မူလအတိုင်း ပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Window အသစ်ပြန်တင် မှရမှာပါ ။ Window
အသစ်မတင်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက် Deep Freeze ဆော့ဖ်ဝဲလေးက အသုံးဝင်ပါတယ် ။
ဘယ်လိုကောင်းလဲ ဆိုတာကတော့ Download File ထဲမှာ မြန်မာလိုရှင်းပြထားပါတယ် ။
အခုပြောလိုက်ရင် ရှုပ်သွားမှာစိုးလို့ပါ ။
5:19 AM Flash No comments
Flash Player လေးကိုတော့ လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင်တော့ အသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ Player လေးပါ။ Flash Game လေးတွေဆိုတာက ဂိမ်းအသေးစားလေးတွေကို ပြောတာပါ။ ဖိုင်ဆိုဒ်ကလည်း အများကြီး နေရာမယူပါဘူး။ တချို့ Software လေးတွေဆိုရင် Flash Player လေးနဲ့ ဖွင့်ရပါတယ်။ အဲဒီ Flash Player လေးဟာ Version တွေအများကြီး ထွက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုကတော့ Version 8 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူကတော့ Flash ဆိုတဲ့အတိုင်း မြန်မြန်ဆန်ဆန် လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး ဆော့ဖ်ဝဲ အသုံးပြုတဲ့ အမြင်လေးကလည်း သပ်ရပ်ပြီး ရိုးရှင်း ကောင်းမွန်ပါတယ်။ Funny Software လေးတွေ၊ Funny Game လေးတွေကိုတော့ အများအားဖြင့် Flash Player လေးနဲ့ပဲဖွင့်လို့ရပါတယ်။
QuickTime Player7( Pro Verison )
12:13 AM Players No comments
QuickTime7Pro Verison လေးဖြစ်ပါတယ်။ QuickTime ရဲ့ ရှင်းလင်းတဲ့ Interface , ကောင်းမွန်တဲ့ အသံအရည်အသွေးတွေ နဲ့အတူ အသုံးပြုသူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ ကြာချိန်ကိုလည်း သိရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို အသံ ရဲ့ အနိမ့်အမြင့် ကိုလည်း တွေ့ရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ သူ့ရဲ့ သတ္တုရောင် ( Metal Colour ) က အသုံးပြုသူတွေကို အဓိက ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ အသုံးပြုရတာကလည်း ရိုးရှင်းပြီး Pro Version ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း အခြားသော လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။
7:59 AM Fonts No comments
ဒီဖောင့်ကလည်း မြန်မာဖောင့်ပါပဲ ။ ဇော်ဂျီဖောင့် မထွက်လာခင်ကတည်းတုန်းက ဒီဖောင့်နဲ့ပဲ စာစီစာရိုက်၊ Chatting ထိုင်တာတို့ ၊ Website ကြည့်တာတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ သူနဲ့ Zawgyi-One Font က စာရိုက်တဲ့ နေရာတွေ မတူကြပါဘူး ။ တချို့ဘလော့တွေဆို Unicode Font နဲ့ရေးထားပါတယ်။ အဲဒါကို Zawgyi- One Font နဲ့ ဖတ်တဲ့အခါမှာ စာလုံးတွေက ရှေ့နောက် တွေလွဲနေပါတယ်၊ ပြီးတော့ တချို့စာလုံးတွေဆို ဘယ်လိုအသံထွက်ရမှန်းကို မသိပါဘူး .။ အဲ့လိုမျိုး မတူညီတာလေး တွေ တော့ရှိပါတယ် ။ ဒါကြောင့် Zawgyi Font သွင်းထားပေမယ့်လည်း မြန်မာလိုဖတ်လို့ မရတာတွေရှိပါတယ် ။ အခုကတော့ Unicode Font လေးပါ ။ Unicode နဲ့ရေးထားတဲ့ စာတွေအားလုံးကို ဖတ်လို့ရပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် Zawgyi-Font နဲ့ရေးထားတာတွေတော့ ဖတ်လို့မရပါဘူး ။ ပြည်တွင်းမှာတော့ မြန်မာဖောင့်တွေ မျိုးစုံရှိပါတယ် ။ အဲဒီထဲကမှ Unicode နဲ့ Zawgyi ကအသုံးအများဆုံး ဖြစ်တဲ့ အတွက် နှစ်ခုစလုံးကို Download ဆွဲထားရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ် ။
11:55 PM USB Stick Tools No comments
USB Stick ထဲမှာရှိတဲ့ Virus တွေကို Scan လုပ်ပေးမယ့် Software လေးဖြစ်ပါတယ် ။ သူက Virus ကို Threat အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ USB ထဲက Virus တွေကို Automitic ရှင်းလင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် . သူ့မှာ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အများအပြား ရှိသလို အဲဒီ လုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကလည်း စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ်အသုံးပြုတတ်ရင် အသုံးပြုတတ်သလောက် စွမ်းဆောင်ရည် မြင့်မှာပါ ။ Virus သတ်တဲ့နေရာမှာတော့ အလွယ်ကူဆုံးပါပဲ . ။ Virus ကို Auto သတ်ခိုင်းနိုင်သလို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်း Virus သတ်နိုင်ပါတယ် ။ USB Stick တိုင်းဟာ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာမှာ အသုံးပြုပြီး တခြားကွန်ပျူတာမှာ သွားရောက်အသုံးပြုတိုင်း Virus ပါလာတတ်ပါတယ် ။ အဲဒါကတော့ USB Stick တိုင်းလိုလိုပါပဲ ။ အဲ့လို ပါလာတဲ့ Virus ကိုမသတ်တတ်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ Virus ရှိမှန်း မသိတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ ကွန်ပျူတာ မှာ Virus ကူးတတ်ပါတယ် ။ Virus ကိုက်နေပြီဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာဟာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ နှေးလာပါတယ် .. ပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Game တွေ၊ File တွေကို Virus ကိုက်ပြီး သုံးမရတော့တဲ့ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ အဲ့လို မဖြစ် ရအောင် USB Disk Security ကို Download ဆွဲထားရင် ကောင်းပါလိမ့်မယ် ။
10:30 PM Hacking Tools No comments
ကွန်ပျူတာမှာ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ထည့်သွင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီ ကွန်ပျူတာ ကနေ Facebook အသုံး ပြုခဲ့တဲ့သူတွေ ရဲ့ Password တွေကို တစ်ခုချင်း တန်းစီပြီး မြင်ရမှာပါ ။ ကိုယ်က Password တွေကို ခဏခဏ ပြောင်းပြီး မေ့တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲ လေးကိုသုံးပါ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ ( Personal Computer ) တွေမှာသာ သုံးပါ။ ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးကို ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းသုံးတာမဟုတ်ဘဲ တခြားသူတစ်ဦးကပါ သုံးတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Software ကိုမသုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ Facebook Account Password ကိုတခြားလူ သိသွားပါလိမ့်မယ် ။ တချို့တွေရှိပါတယ် .. ကိုယ်က သူများ Password ကို Recovery လုပ်ချင်ပေမယ့်လည်း အသုံးပြုတာမကျွမ်းကျင်တော့ ကိုယ့် Password ပါသွားတတ်ပါတယ် ။ အဲ့လိုမျိုး တွေမဖြစ်စေဖို့အတွက် ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ တွေမှာသာ သုံးသင့်တယ်လို့ပြောတာပါ ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို Download ဆွဲချင်တဲ့ သူတွေအတွက် .....
10:20 PM Portable Software No comments
USB Stick ထဲကို အလွယ်တကူ ထည့်ထားနိုင်ပြီး ကွန်ပျူတာ ရှိတဲ့ နေရာတိုင်း မှာ Google Chrome ကိုအသုံး ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ အသုံးပြုတဲ့အခါ မှာလည်း Install လုပ်စရာမလိုဘဲ တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ Google Chrome Browser ဟာ Page Loading Speed မြန်ဆန်တဲ့ အတွက် Google Chrome ကို နေရာတိုင်းမှာ သုံးချင်ကြတဲ့ User တွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အများစုက Mozilla Firefox ကိုပဲ အသုံးပြုနေကြတော့ Google Chrome ဟာနေရာတိုင်း မှာ မရှိနိုင်ပါဘူး။ အဲဒီအတွက် Portable Google Chrome လေးက အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ် ။ Chrome Browser က Firefox ထက် Loading ပိုမြန်ပါတယ် ။ အဲဒါကြောင့် Chrome မှာလည်း သူ့ပရိတ်သတ်နဲ့ သူ နာမည်ကြီး နေတာပါ ။ အခု Chrome ကို Portable Version ထုတ်လုပ်လိုက်ပြီ ဖြစ်တဲ့ အတွက် Google Chrome ကို ကွန်ပျူတာရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။
8:39 AM Hacking Tools No comments
ဆော့ဖ်ဝဲလေးက မျက်လှည့်ဆန်ဆန်လေးပါ ။ Password အမည်းတုံးလေးတွေကို ဖောက်ပြီး မြင်တွေ့ရမယ့် Software လေးပါ။ တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က သေးတော့ WinRar နဲ့မချုပ်တော့ပါဘူး ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးက File Size သေးသလောက် အစွမ်းထက်လှပါတယ်။ သူက အမည်းတုံးတွေနေရာမှာ တကယ့် Password အမှန်ကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို တော့ စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ။ Download ဆွဲချင်ရင် ကြိုက်တဲ့ Link ကနေ Download ဆွဲလို့ရပါတယ် ။ File Size လေးက 88 KB ပဲရှိပါတယ် ။ ကမန်းကတန်းတင်ပေးလိုက်ရလို့ နာမည်က တစ်မျိုးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါက SeePassword Software လေးပါ။
5:31 AM Portable Software No comments
ခရီးဆောင် Firefox လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ကိုယ့်ရဲ့ Memory Stick မှာ သွင်းထားပြီး ကွန်ပျူတာရှိတဲ့ နေရာတိုင်းမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါတယ်။ သွားလေရာမှာ Firefox ကို သုံးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတာပါ။ Portable ဖြစ်တဲ့ အတွက်လည်း အလွယ်တကူ မည်သည့်နေရာမှာမဆို အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ အသုံးပြုတဲ့ အခါမှာလည်း အရင် Firefox အတိုင်း လွယ်ကူ ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြု နိုင်မှာပါ ။ အရင်က တခြားကွန်ပျူတာဆိုင်တွေ၊ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ အင်တာနက် သွားသုံးတဲ့အခါ တချို့ဆိုင်တွေက Firefox ကို Install မလုပ်ထားပါဘူး။ အဲ့လိုဆိုရင် Firefox Setup ကို ယူသွားပြီးတော့ ဟိုမှာ Install လုပ်ရပါတယ်။ ပြီးတော့အဲဒီ Firefox ကလည်း အင်တာနက်ဆိုင်မှာ Install လုပ်ပြီးတဲ့အတွက် ပြန်ဖျက်ဖို့ကလည်း တော်တော်ရှုပ်မှာပါ။ အဲ့လို တစ်ခါသွားတိုင်း Install လုပ်၊ ပြန်ဖျက် လိုက်နဲ့ဆိုရင် ကိုယ်က အင်တာနက်သုံးရမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ။ အဲဒါနဲ့တင်ပဲ ၁၅ မိနစ်၊ နာရီဝက်လောက် က အချိန်ကုန်သွားလောက်ပါပြီ ။ အဲ့လိုမျိုး အခက်အခဲတွေအတွက် ဒီ Portable Firefox လေးကအသုံးဝင်မှာပါ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Download ဆွဲထားတော့လည်း ကိုယ့်အတွက် အရှုံးမရှိနိုင်ပါဘူး ။
5:14 AM Gtalk No comments
Google Password တွေကို Recovery လုပ်ပေးမယ့်ဆော့ဖ်ဝဲလေး ဖြစ်ပါတယ် ။ Recovery လုပ်တယ်ဆိုတာကတော့ ပြန်လည်ပြီးတော့ ဖော်ထုတ်တာပါ။ အခု Google Password Recovery လေးဟာ Gmail , Gtalk အားလုံးရဲ့ Password တွေကိုပြန်လည် ဖော်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ။ အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ ဒီဆော့ဖ်ဝဲ ကို သုံးတယ်ဆိုရင် တော့ သတိထားပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ အဲ့လိုမျိုး လုပ်တာတွေ မရှိပါဘူး။ ဒီဆိုမျိုးတွေကို နိုင်ငံခြားတို့၊ ပြီးတော့ Hacker တွေသာ အသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုရေးလိုက်တာကလည်း ဗဟုသုတလေး ရအောင်လို့ပါ။ တခြား ဘာသဘောမှ မပါဝင်ပါဘူး။ ဒီ Password Recovery လေးက Google Password တွေကိုပဲ Recover လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို အောက်မှာ Download ဆွဲနိုင်ပါတယ်။
Proxy Real Hider
2:02 AM IP ၊ Proxy No comments
ကိုယ့်ရဲ့ IP လေးကို Hide လုပ်ပေးနိုင်မယ့် tool လေးပါ။ မြန်မာပြည်က သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို Download လုပ်ထားသင့်တယ် လို့ထင်ပါတယ်။ Proxy Hide လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်း ကိုယ် ကိုယ်တိုင်က Hide IP ဆိုတဲ့ Button လေးကိုနှိပ်မှ Proxy တွေက Hide ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ Hide မလုပ်ပါဘူး။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးရဲ့ အသုံးဝင်ပုံလေးကိုပြောပါ့မယ်။ ဒီလိုပါ - တချို့သော ဆော့ဖ်ဝဲတွေကို Download လုပ်တဲ့အခါမှာ မြန်မာပြည်က IP Address တွေကို လက်မခံတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မြန်မာပြည်က သုံးနေတာဆိုရင် အဲဒီဆိုဒ်ထဲကို ၀င်မသွားဘဲနဲ့ Errro ပြတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကို မကြုံချင်ဘူးဆိုရင်တော့ IP Hider လေးကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ ကွန်နက်ရှင် အရမ်းနှေးနေတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးက ကွန်နက်ရှင် နှေးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ။ အရမ်းကြီးမြန်လာမယ်လို့ မဆိုလိုဘူးနော် ။ အရင်သုံးနေကျ ထက်တော့ ပိုမြန်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ တချို့ကျတော့လည်း Proxy
ကိုကျော်ပြီးကြည့်ရင် ပိုပြီးနှေးသွားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
CCleaner ( Resgister Version )
7:16 AM Uninstall Tools No comments
ကွန်ပျူတာကို ပိုမြန်လာစေမည့် Software လေးဖြစ်ပါတယ်။ ကွန်ပျူတာအတွင်းမှာရှိတဲ့ မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖြေရှင်းပေးမှာ ဖြစ်ပြီး Browser တွေကို လေးလံစေတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်မှန်သမျှကို ဒီ CCleaner လေးကရှင်း ပေးပါလိမ့်မယ်။ သူရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေထဲ မှာ Uninstall Tool ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလုပ်ဆောင်ချက်က ကွန်ပျူတာ ထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲအကုန်လုံးကို ဖော်ပြပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဖျက်ချင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ကို Click ထောက်ပြီး Uninstall ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ ဆော့ဖ်ဝဲကို ကွန်ပျူတာအတွင်းမှ အပြီးပိုင် ဖျက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် . ။ Recycle Bin ထဲမှာတောင် သွားဖျက်စရာမလိုတော့ပါဘူး . ။ သူ့မှာက လုပ်ဆောင်ချက်တွေ အများအပြားပါဝင်သလို Setting တွေကိုလည်း ကိုယ်လိုအပ်သလို အလွယ်တူ ပြောင်းလဲနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။ အသုံးပြုရတာ ရှင်းလင်း တဲ့အတွက် အသုံးပြုသူတွေကို စိတ်တိုင်း ကျစေမှာပါ။
Connectify + Keygen ( Pro Version )
6:57 AM Connection No comments
Laptop ၊ Desktop တို့ကနေ တစ်ဆင့် Wifi ကိုပြန်လည်လွှင့်ပေးနိုင်မယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလေးဖြစ်ပါတယ်။ Keygen လေးပါ တစ်ခါတည်း ပါတဲ့ အတွက်Pro Version လေးပါပဲ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးရဲ့ အားသာချက်က WiFi ကိုပြန်လွှင့်မယ် ဆိုရင် ကြားခံ Router မလိုအပ်ပဲ WiFi ပြန်လွှင့်နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ ကိုယ်လွှင့်ပေးမယ့် WiFi ကိုလည်း Password ထားပြီး အသုံးပြုလို့ ရတဲ့အတွက် တခြားသူတွေ ခိုးသုံးမှာကိုလည်း မပူပင်ရတော့ပါဘူး။ မိမိရဲ့ WiFi ကိုလာရောက် ချိတ်ဆက်တဲ့ Device တွေကိုလည်း File , Music , Picture , Video တွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့ ( Share ) မျှဝေ လို့ရပါတယ်။ ကိုယ်လွှင့်ပေးမယ့် ကွန်နက်ရှင် လိုင်းအမျိုးအစားကိုလည်း ရွေးလို့ရပါတယ်။ သူက အကွာအဝေးတော်တော်များများ အထိတော့ WiFi လွှင့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ Download ဆွဲချင်ရင် ကြိုက်တဲ့ Link ကနေ Download ဆွဲလို့ရပါတယ်။
2:21 AM Adobe Collection No comments
Adobe Company ကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Software လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။ PDF ဖိုင်များ ( E-Books ) များကိုကွန်ပျူတာနဲ့ ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ပေးမယ့် ဆော့ဖ်ဝဲလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့်တော့ အင်တာနက်က မှတ်သားစရာစာအုပ်တွေ၊ ကိုယ်ဝါသနာပါရာစာအုပ်၊ အသိပညာစာအုပ် တွေကို Download ဆွဲပြီး စာဖတ်တဲ့အခါမှာတော့ ဖတ်လို့မရတဲ့ အခက်အခဲတွေကို တွေ့ကြုံရပါတယ်။ အဲ့လိုအခက်အခဲတွေကို Adobe Reader လေးက ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကို စာအုပ်များများဖတ်တဲ့သူတွေ၊ ပြီးတော့ အင်တာနက်ကနေ PDF File တွေကို Download လုပ်တတ်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ Adobe Reader လေးကို Download လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
2:02 AM Desktop No comments
ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေး ကတော့ တော်တော်မိုက်ပါတယ်။ မိမိရဲ့ Desktop Screen မှာ ယင်ကောင်တွေ သွားနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒီ ယင်ကောင်တွေကို ပျောက်စေဖို့က အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ မိမိပျောက်စေချင်တဲ့ ယင်ကောင် ပေါ်ကို Left - Click နှစ်ချက်နှိပ် လိုက်တာနဲ့ ယင်ကောင် ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်ကောင် အကုန်လုံးကို ပျောက်စေ ချင်ရင်တော့ ယင်ကောင်အားလုံးကို Left - Click နှစ်ချက်စီ လိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရမယ် ဆိုရင် နည်းနည်းတော့ ရွံဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပျင်းနေတဲ့ အခါတို့ ၊ အပျော်တမ်း သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ မိုက်ပါတယ်။ Desktop မျက်နှာပြင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးကို မကြိုက်တဲ့ သူတွေအတွက် ယင်ကောင်လေးတွေ မိမိရဲ့ Desktop Screen မှာသွားလာ လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ ယင်ကောင်လေး တွေက မိမိဂိမ်းကစားလည်း ပေါ်နေမှာဖြစ်သလို ၊ မိမိအင်တာနက်သုံးရင်လည်း ယင်ကောင်လေးတွေ ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲ အကြောင်းလေး ကို သမင်လေးရဲ့ သူငယ်ချင်း Peter Pan ဆီက သိလို့ အခုလို တင်ပေးလိုက်တာပါ ။ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုက်တဲ့ Link လေးကနေ Download ဆွဲလို့ရပါတယ် ။
Dowlnoad From ziddu
2:00 AM Players No comments
Media လောကအတွက် အသုံးဝင်မယ့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုပါ။ ဒီဆော့ဖ်ဝဲလေးကိုလည်း လူသိများပြီး လူကြိုက်လည်း များကြပါတယ်။ သူက သီချင်းတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေကို ဖွင့်ကြည့်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖွင့်တဲ့ အခါမှာ Format တော်တော်များများကိုလည်း ဖွင့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ်ပါပဲ။ သူက တခြားသော Player တွေထက် ထူးခြားသာလွန်မှု တွေ ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ထူးခြားချက်က MP3 သီချင်းတွေကို နှေးအောင်လုပ်လို့ရသလို၊ မြန်အောင်လည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒီလိုမျိုးလုပ်ဆောင်ချက်တွေက တခြားသော Player တွေထက် အားသာချက်လေးတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ VLC Player ကို စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ ကြိုက်တဲ့ Link ကနေ Download ဆွဲလို့ရပါတယ်။
သမင်လေး ဘလော့ဆက်မရေးဖြစ်တော့ပါ ။ ရေးရင်လည်း ဒီဘလော့လိပ်စာအတိုင်းသာဖြစ်ပါတယ် .. ။ Thanks For Read !
ကန်ရာသီဖွားတို့ရဲ့ တစ်သက်တာ ဘ၀ခရီးလမ်း( တစ်သက်တာဟောစာတမ်း )
သေချာဖတ်နော် . . ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေက ကန်ရာသီဖွား ဆိုရင်သူ့အကြိုက်လိုက်လျောလို့ရအောင် ။ သူငယ်ချင်းအကြံပေးပါရစေ . ။ ဒီစာမ...
Gmail အသုံးပြုနည်း ( မြန်မာလို )
Gmail ကိုအခုမှ စသုံးတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီစာအုပ်လေးက အရမ်းကိုသင့်တော်ပါတယ် .. ပြီးတော့ GMail နဲ့ပတ်သက်ပြီး လျို့ဝှက်ချက်တွေကိုသိချင်တဲ့ ...
သွေးဗေဒင် (2)
အေသွေးပိုင်ရှင်များအကြောင်း သွေးအမျိုးအစားကို လိုက်ပြီး လူတွေရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ခန့်မှန်းလို့လည်း ရပါတယ်..ဒီနေ့တော့ သွေးအုပ်စု လေး...
လူသားအားလုံးဟာ ၁၂ အတွင်းမှာ မွေးဖွားတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ ဘယ်သူမှ ၁၃ လမှာမမွေးပါဘူး .။ လူတိုင်း လူတိုင်း ကိုယ့်သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတေ...
ဗေဒင် Game လေးကစားကြမယ်
ဒီ ဗေဒင် Game လေးကတကယ်မှန်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တော့ မကစားရသေးဘူး။ ဘလော့တွေမှာ နာမည်ကြီးနေလို့ ဒီပို့စ်လေးကို ပြန်လည်မျှဝေတာပါ။...
Adobe Collection (2)
Hacking နည်းပညာများ (1)
IP ၊ Proxy (3)
Phone အမေးအဖြေများ (32)
USB Stick Tools (2)
CAMBRIDGE Advanced Learners's Dictionary ( Th...
Internet Connection Speed Hacking ( Connection...
Mozilla Optimizer ( Mozilla ရဲ့ Page Loading အမြ...
Speed Connect ( ကွန်နက်ရှင်အမြန်နှုန်း မြှင့်ပေး...
Power DVD 11 ( Latest Version )
Proxy Switcher ( Proxy တွေကို တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖွင့်...
ွှTyping Master ( English Typing )
မေး ။ ဖုန်းမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ Memory Card ...
ှုInternet Download Manager ( IDM )
Download Speed မြန်ချင်တဲ့သူများအတွက်
သွေးဗေဒင် ( 1 )
Window Notepad Save တဲ့အခါမြန်မာလိုပေါ်ချင်ရင်
Read More Buttons Series ( 1 )
Internet Cyclone ( ကွန်နက်ရှင်နှေးနေသောသူများအတွက်...
Gtalk ( Black )
Youtube Video Downloader ( Youtube ကဗီဒီယိုတွေကိ...
Window7Build 7600 This copy of Window is not Gen...
Fast Shutdown (ှShut Down မြန်မြန်ချချင်တဲ့သူများ...
Desktop icon တွေကို ၀ိုင်းသွားအောင်
Mozilla Firefox ကို ပိုမြန်လာအောင်လုပ်ပေးမယ်...
USB Thief USB နဲ့ Password Hacking လုပ်တဲ့ လေ...
Copyright © သမင်လေး ( Fawn ) | Powered by Blogger